Ukuphupha ngekhalenda Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iikhalenda zisinceda ukuba silungelelanise usuku nosuku kwaye singalibali imihla ebalulekileyo nexabisayo. Kwi el mundo Ukucinga ukuba uninzi lwabantu luzifumana lukulo, uninzi alusenakukwenza ngaphandle kwekhalenda yobuqu naphantsi kwazo naziphi na iimeko. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu.
Kodwa kunokuthetha ntoni xa siphupha ikhalenda? Kuchazwa njani oku njengomfuziselo wephupha?
1 Uphawu lwephupha «ikhalenda» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikhalenda» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ikhalenda» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikhalenda» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na obona kuphela ikhalenda ephupheni kufuneka, ngokoluvo ngokubanzi, abe kwimeko engathandekiyo iingcongconi lungisa. Iiprojekthi ezithile ziya kusilela ukuphupha, mhlawumbi ngenxa yokuba into ebalulekileyo ayihoywanga. Ulibale umhla obalulekileyo?
Loluphi usuku lweveki olibonileyo kwikhalenda? Mvulo Lwesibini Lwesithathu Lwesine Lwesihlanu Cawe.
Amaphupha apho uthenga ikhalenda ithembisa izinto ezintle ngakumbi. Oku kuhlala kumela enye Isiqalo esitsha. Iqela elinomdla lijonge kwikamva elonwabisayo apho izicwangciso zakhe ziya kuphumelela kwaye uya kuzifezekisa iinjongo zakhe. Kukwasebenza kwanjalo kuyo ukuba ikhalenda yakudala ilahlwe ephupheni: Ukuphupha kungoyisa inkxalabo ezininzi okokugqibela kwikamva kwaye uhambe kubomi bemihla ngemihla ungakhathazeki.
Ukugcina ikhalenda kukwafuzisela into elungileyo, kuba ikuvumela ukuba wenze izigqibo malunga nekhalenda emiswe kakuhle esebenza ngale ndlela. Ubomi bemihla ngemihla ukuya. Amaphupha acwangcisa izinto ezibalulekileyo ngononophelo kwaye ngokuthembekileyo kubomi bakho bokwenyani.
Nangona amaphupha apho lo mntu kuthethwa ngaye exhalabile ngomhla othile kwikhalenda kuhlala kubonwa njengoxinzelelo, akufuneki athethe ngokungathandekiyo ngokukodwa. Endaweni yoko, iphupha kufuneka, ngokoluvo ngokubanzi, lingazixakekisi kakhulu ngezinto ezithile: ziya kuhamba kakuhle, ungathemba nomtshato owonwabileyo.
Uphawu lwephupha «ikhalenda» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha lumele ezithile ngokwendlela yokutolika kwengqondo. Amaxesha exesha ebomini balo mntu uchaphazelekayo. Inokubhekisa kwixesha elidlulileyo, ukuba umntu ophuphayo akakhale. Ufuna ukubuyela kumava athile kwaye ube nokuwaqonda ngakumbi kamva, okanye mhlawumbi unganakho ukutshintsha. Usoyika ukungabi naxesha laneleyo ebomini.
Ukubuyisa, ikhalenda ephupheni inokubhekisa nakwikamva, ekungakhathazwa mntu kulo meko. Akakhathazeki ngokungakwazi ukuyisebenzisa kakhulu, kodwa kukuba ulinganisele yena kunye nobomi bakhe.
Ukuba ikhalenda inxulumene nephupha ukuza kuthi ga ngoku, oku kubonisa, ngokwezinye iingcali zengqondo, ukuba ukuphupha a ixesha elitsha lobomi bam isondele. Ulungiselelwe kakuhle ngaphakathi kwesi siqalo sitsha, kodwa usakhathazekile malunga nokuba uya kuba nakho na ukwenza utshintsho kwisicwangciso sakho sobuqu esingcono. Unokuziva ulinganiselwe kwaye unqandwe yimihla ethile.
Kule siseko, kubalulekile ukuba umntu ochaphazelekayo ahlale ezolile kwaye ngokuthe ngcembe asondele kumacandelo ahlukeneyo. Kubalulekile ukuba ungalahlekani nolwakhiwo lwakho, kodwa cinga ngamanyathelo amancinci. Kuphela kuxa unokuphumelela.
Uphawu lwephupha «ikhalenda» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, ikhalenda ifanekisela umntu ephupheni. setha ishedyuli, ebalaselisa imihla ebalulekileyo, kunye namaqela kunye nemibhiyozo.